आफुलाई जन्म दिने बि,रामी भएकी आमालाई सडकको छेउमै छो,डेर कसले हिड्यो ? – Dainik Sangalo
आफुलाई जन्म दिने बि,रामी भएकी आमालाई सडकको छेउमै छो,डेर कसले हिड्यो ?
December 16, 2020 115
काठमाडौंस्थित तीनकुनेको व्यस्त सडक । सडकको छेउमा फुटपाथ । पुटपाथमा पनि मानिसको ओहोर–दोहोर बाक्लो छ । सडकको पश्चिमपट्टिको फुटपाथ छेउमै भिरालो जमिन छ । जहाँ एक अधवैशे महिला सुतिरहेकी छिन् ।
मोटोमाथि ब्ल्याङ्केट, ब्ल्याङ्केटमाथि उनी सु,तेकी छिन् । उनको टाउकोमा सिरानी अडिएको छ । र, ब्ल्याङ्केट नै ओढेकी छिन् ।
ती महिलालाई सरिता खड्काले बाटो हिँड्दै गर्दा तीन दिनअघि देखिकी थिइन् । त्यतिबेला पनि ती महिलाको आसन उस्तै थियो । सरिताले भनिन्, ‘अफिसबाट फर्कंदै गर्दा साँझको आठ बजेतिर पुल छेउमा कपडाको थुप्रो र मान्छेजस्तै देखें । नजिकै पुगेर हेर्दा भर्खरै कसैले छो, डेर ग, एको जस्तो देखिन्थ्यो ।’
महिलाको अनुहार गोरो छ । तर, दुब्लाएर क, क्रक्क परेको । शरीरमा न्यानो कपडा लगाइएको थियो । ती महिला भने न हलचल गर्न सक्थिन्, न त केही बोल्न नै । सरिताले सोचिन्– कोही आफन्त आएर लैजालान् की ! अनि उनी बाटो लागिन् ।
तर, अर्को विहान पुग्दा पनि ती महिलाको अवस्था उस्तै थियो । सरिताले भनिन्, ‘मन थाम्न न, सकेर डाइपर परिवर्तन गरिदिएँ अनि केही खाना र जुस खुवाइदिएँ ।’ ती महिलाले भने आफैं खानसमेत स, क्दैनथिन् । किनकी उनलाई प्या, रा, ला, इसि, सले गाँ, x जेको छ ।
मंगलबार विहान पनि उनी नौ बजेसम्म उनै महिलाको छेउमा गएर बसिन् । खाना खुवाइन् । अहँ ! महिलालाई लिनको लागि कोही आफन्त आएनन् । सरिताले भनिन्, ‘बोलाउँदा पनि केही बोल्न स, क्नुभएन । रोइमात्र रहनुभयो ।’ सरितालाई आपत आइलाग्यो– अब कहाँ लैजाने, कसलाई भन्ने ? यही आ, पतले सरिताले मानवसेवा आश्रमबारे जानकारी पाइन् ।
मानव सेवा आश्रमका संयोजक सुमन वर्तालाले भने, ‘उहाँलाई अपरान्ह उ, द्धार गरेका छौँ ।’बे, x वा, रिसे ती महिलाको प्रकृति हेर्दा कसैले अस्पताल वा घरबाटै लिएर छो, डेको जस्तो देखिने सुमन बताउँछन् । उनले थपे, ‘महिलाको उमेर ४० देखि ४५ वर्षको जस्तो देखिन्छ । आफन्तले नै लिएर छो, डेको हो की भन्ने अनुमान पनि छ ।’ तर, उनीहरुले पनि अहिलेसम्म आफन्त पत्ता लगाउन सकेका छैनन् ।
तीनकुनेमा देखिएको यो दृष्यले मानिसहरु हिं, x स्रक बन्दै गइरहेको देखाउँछ । मंसिर–पुसको चिसो जाडोमा आफ्नै अभिभावकलाई घरबाट नि, का, लेर सडकमा ला, वा, रिस छोड्न कस्तो मानसिकताले काम गर्छ ? यो घटनाले मा, नवीयतामाथि निकै ठूलो प्रश्न चिन्ह पनि खडा गरेको छ ।
केही समयअघि आफ्नै परिवारबाट हेला भएपछि घर छोडेर खुलामञ्चमा निःशुल्क खाना कुरेर बसिरहेका एक वृद्धको समाचार अनलाइनखबरबाटै प्रकाशित भएको थियो । भर्खर जन्मिएको शिशुलाई फुटपाथ र झाडीमा फ्याँ, x कि, एको समाचार पनि पटक–पटक प्रकाशित गर्नुपरेको छ ।
दुई वर्षअघि वर्षअघि मानव सेवा आश्रमकै छेउमा क्या, x न्स, र लागेको एक वृद्धलाई लिएर आफन्तले छो, डेका थिए । उनको मुख सुन्निएको थियो र सि, किस्त वि, रामी थिए । यस्तो देखेपछि आश्रमले नै वृद्धाको स्या, हार गर्न थाल्यो । सुमन भन्छन्, ‘कहिलेकाहीँ यस्ता केसहरु भेटिरहेका हुन्छन् ।
परिवार भएपछि आश्रमले लिँदैन भन्ने थाहा पाएर मानिसहरुले यस्तो ग, ति, वि, धि गर्ने सुमनको भनाइ छ । तर, ती वृद्धा लामोसमय बाँ, x च्न स, केनन् । परिवारले नै बोझको रुपमा लिएर आफन्तलाई जि, x उँदै सडकमा छो, ड्दिने जस्तो क्रू, x र नि, र्णय लिने गरेका सुमनको बुझाइ छ ।
Prevबेहुलीले बेहुलालाई मण्डपमा छोडेर अफिस गइन्,सरकारी शिक्षकको नियुक्ति लिएर फर्केपछि भयो विदाई
Nextआफुलाई जन्म दिने बि,रामी भएकी आमालाई सडकको छेउमै छो,डेर कसले हि,ड्यो ?
ओलि सरकारले गर्‍यो यस्तो निर्णय
पाचथरमा ९ जनाको सामुहिक ह, त्या, त्यो दिनको नालेबेली यस्तो रहेछ
अख्तियार प्रमुख बनाएकोमा प्रधानमन्त्रीलाई मु’रीमुरी धन्यवाद : पूर्व गृहसचिव प्रेमकुमार राई